3 codsi si loo habeeyo shaqadaada | Bezzia
3 barnaamijyo si aad u abaabusho shaqadaada
Maria vazquez | 13/10/2021 10:00 | Haweeney fulin ah
Haddii aad ka shaqayso guriga dibaddiisa sida haddii aad shaqayso teleefanka Waxaan hubnaa inaad ku farxi doonto inaad ogaato codsiyada aan maanta soo jeedinno si aad u habayso shaqadaada. Waana taas waxaa jira hawlo badan oo na mashquuliya maalin kasta Oo had iyo jeer ma haysanno qalab sax ah oo aan ku qaban karno.
Abaabulka hawlaha maalinlaha ah, maareynta mashaariicda iyo baahinta shaqada adiga oo la wadaagaya hawlaha saaxiibbada kale waa wax adiga kuugu fududcodsiyada si aad u habayso shaqadaada kuwaas oo aan maanta kula hadlayno. Waxaad sidoo kale ku rakibi kartaa moobilkaaga, kombiyuutarkaaga iyo iPadkaaga, si aad u hesho raaxo weyn. Soo hel!
Todoist waa a aaladda maaraynta hawsha Iyada oo leh naqshad fudud oo kaa caawineysa inaad dib u hesho cadadkaaga iyo deggenaanshaha maskaxdaada adoo ka saaraya dhammaan shaqooyinka madaxaaga si aad ugu qorto liis meel kasta oo aad joogto ama aaladda aad isticmaaleyso.
Kani waa jadwal aad u dhammaystiran, liis hawleed iyo codsi qoraal ah oo ku siinaya aalado aan dhammaad lahayn si loo habeeyo howlahaaga iyo howlahaaga. Waxaad ku kala saari kartaa mashaariicda, sumadaha iyo heerarka mudnaanta, iyo sidoo kale u xilsaaridda taariikhda la cayimay ama muddaysan haddii ay yihiin hawlo soo noqnoqda. Markaa waxaad yeelan doontaa fikrad cad wax kasta oo ay tahay inaad samayso mar walba mana lumin doontid hawlaha ugu muhiimsan.
Barnaamijkan waxaad sidoo kale ku fududayn kartaa habka shaqadaada ku xiraya faylashaada, emaylkaaga iyo jadwalkaaga. Barnaamijkani wuxuu kaloo kaa caawinayaa inaad maamusho mashaariicda waaweyn adiga oo kuu oggolaanaya inaad kala qaybiso oo aad hawlo u dhiibto xubnaha kooxda kale. Qaybi oo ka guulayso hawl maalmeedkaaga mashaariicda la wadaago!
Inta badan astaamahan waxaa lagu heli karaa bilaash, laakiin waxaad heli kartaa qaar kale oo waxtar leh. ku biirista akoon Pro (€ 3 / bishii) ama Ganacsiga kooxaha (€ 5 / bishii). Kuwani waxay ku siinayaan shaandhaynta caadada ah ilaa tusaalooyinka mashruuca iyo tirakoobka wax -soo -saarka, iyo dhinacyo kale.
Dareen leh oo raaxo leh, Evernote ayaa kaa caawin doonta maareynta iyo habeynta howlahaaga. Adigoo adeegsanaya aaladdan waxaad ku abuuri kartaa liisaskaaga wax-qabadka, ballamaha jadwalka taariikhda, koox iyo qabashada fikradaha qaabab kala duwan iyo xitaa digitized dukumiintiyadaada kaamerada ka moobaylkaaga.
Si aad uga dhigto adeegsiga app -ka mid raaxo leh, waad awoodaa ku xiro isla koontada Evernote aaladahaaga kala duwan: mobile, kombiyuutar iyo kiniin. Habkan waxaad had iyo jeer ku hayn doontaa macluumaadkaaga muhiimka ah: qoraaladaada ayaa si otomaatig ah loogu dhex geliyaa dhammaan aaladahaaga. Xusuusnow, jidka, oo aad ku dari karto qoraal, sawirro, maqal, baaritaanno, faylasha PDF iyo dukumiintiyo.
Samee oo u xilsaar hawlaha gudaha qoraaladaada taariikhaha, ogeysiisyada iyo xusuusinta si aysan waxba kaaga baxsan oo u kordhiso wax -soo -saarkaaga! Waxaad ku samayn kartaa qorshaheeda bilaashka ah ama waxaad adeegsan kartaa qorshihiisa Shakhsiyeed ama Xirfadeed, oo ah € 6,99 iyo .8,99 XNUMX bishiiba, siday u kala horreeyaan.
Trello waa codsi ruug -caddaa ah oo loogu talagalay maareynta mashruuca kaasoo muddooyinkii u dambeeyay sii kordhayay sida telecommuting -ku uu sameeyay. Liisaska iyo kaararka ayaa ah tiirarka ururka kaas oo guddiyada arjigan ku salaysan yihiin.
U xilsaaro hawlaha, deji waqtiyada la cayimay, hubi xuduudaha wax -soo -saarka, jadwalka jadwalka iyo waxyaabo kaloo badan si aad u aragto qulqulka shaqada oo aad loo hagaajiyay. Kaararka Trello waxay la mid yihiin ururka, markay oggolaadaan maamul, kormeer iyo wadaag hawlaha bilow ilaa dhamaad. Fur kaar kasta si aad u ogaato nidaamka deegaanka ee liisaska hubinta, taariikhaha la qabtay, lifaaqyada, sheekaysiga iyo waxyaabo kaloo badan.
In kasta oo Trello uu yahay qabanqaabiye shaqsiyeed oo ku habboon, haddana waxaa sida ugu wanaagsan loo adeegsadaa iyadoo loo shaqeeyo koox ahaan. La soco dhaqdhaqaaqa kooxdaada ka shaqaynta iyo awood u lahaanshaha sida kaadhadhku ugu kala gudbaan xubnaha kala duwan ilaa ay ka dhammaystirmaan waa wax aad ku samayn karto xitaa koontadaada bilaashka ah. Laakiin haddii aad u baahato wax intaa ka badan, waxaad kiraysan kartaa qorshahooda Premium, oo ku habboon kooxaha ilaa 100 qof ah oo ay tahay inay kormeeraan dhowr mashruuc.
Haddii aad u shaqayso qof kale xafiiska ama guriga, sida haddii aad tahay qof iskii u shaqaysta ama madaxbannaan. Codsiyadaan si loo habeeyo shaqadaada ayaa kuu fududeyn kara maalin walba. Dhammaantoodna waa kuwo dareen leh, isku day isku day!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Haweeney fulin ah » 3 barnaamijyo si aad u abaabusho shaqadaada
Sida loo sameeyo diirka wajiga iyo jirka oo wanaagsan guriga
Waa maxay microbiota mindhicirka 3 talooyin si loo hagaajiyo